पाक्न थाल्यो जुम्लामा मात्र उत्पादन हुने मार्सी धान…हेर्नुहोस् । – Nepal Online Khabar
खलङ्गा : जुम्लामा मात्र उत्पादन हुने जुम्ली मार्सी धान यतिबेला यहाँका खेतमा पाक्न थालेको छ । विश्वको सबैभन्दा उच्च स्थानमा फल्ने जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकास्थित छुमचौरमा कालीमार्सी धान खेतमा पाकेको छ ।
यहाँ फलेको जुम्ली मार्सी धानबाट उत्पादनहुने चामल देशका विभिन्न शहरमा राम्रो मूल्यमा विक्री हुने गरेको कालीमार्सी धान संरक्षण तथा प्रवद्र्धन केन्द्रका अध्यक्ष कलिमान महताराले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,“काली मार्सी धानको संरक्षण स्थानीय सरकारले मात्र गर्न नसक्ने भएकाले प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले किसानलाई विभिन्न राहतका कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ ।” हाल विभिन्न रोग तथा जलवायु परिर्वतनले गर्दा पनि धान उत्पादन घट्दै गएको किसानहरु बताउँछन् ।
स्वाद, रोग र किराको प्रतिरोध गर्न सक्ने गुण र पोषक तत्वको कारण जुम्ली मार्सी धानको महत्व अन्तर्राष्ट्रिय जगतसम्म पुगेको छ ।राणाकालमा केन्द्रमा रहेका शासकहरूका लागि यही मार्सी धानको चामल हुलाकबाट काठमाडौँसम्म पुराउने गरेको यहाँका ज्येष्ठ नागरिक बताउँछन् ।
करीब ७०० वर्षअघि जुम्लीका इष्ट देवता चन्दननाथले भारतको काश्मिरबाट मार्सी धान भित्र्याएको विश्वास गरिन्छ । कृषि विज्ञहरुका अनुसार चिसो हावापानीमा उत्पादन हुने खाद्यान्न र फलफूल निकै स्वादिला हुन्छन् । जिल्लामा २८ सय हेक्टरमा धान खेती हुने गरेको कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख बालकराम देवकोटाकाले बताउनुभयो ।
यसको चामलको भात खाँदा धेरै बेरसम्म भोक लाग्दैन । स्वादिलो, आडिलो र स्वस्थकर हुने गरेको यहाँका जानकार बताउँछन् । निकै पोषिलो र अत्याधिक कार्बोहाइड्रेट भएको काली मार्सी स्वास्थ्यवर्धक पनि मानिन्छ ।मार्सी धानको चामल खैरो रङको हुन्छ ।
खैरो देखिने भएकाले कसैकसैले यसलाई रातो चामल पनि भन्छन् । उच्च रक्तचाप, मधुमेह लगायतका बिरामीलाई यो चामलको भातले निकै फाइदा हुने भएकाले शहरमा यसको माग बढेको नागरिक समाज जुम्लाका संयोजक राजबहादुर महतले बताउनुभयो ।
Prevन स्यानिटाइजर न दुरी, भाडा मात्र बढी अनि कसरी हुन्छ कोरोना नियन्त्रण ?
Nextविदेसिन थाले युवाहरु, प्रदेश नम्बर १ को बाहेक ६ वटै श्रम कार्यालय खुलीसकेका छ्न…हेर्नुहोस् ।
प्रधानमन्त्री ओली समर्थनमा उ,र्लिए जनता , भारतीय दलाल होसियार…हेर्नुहोस।
खुशीको खबर : मुस्कान खातुनलाई अमेरिकाले अन्तरास्ट्रिय साहसि महिला अवार्ड प्रदान गर्ने !
डा. बाबुराम भट्टराई भन्नुहुन्छ : आफु पनि नजान्ने अरुको कुरा नसुन्ने ओलीले गर्दा देश ब’र्बाद भयो…हेर्नुहोस् ।